लेजर कपाल हटाउने प्रश्नहरूको बारेमा केहि - टेक्निकल जानकारी - शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण तकनीक कम्पनी लिमिटेड।
लेजर कपाल हटाउने प्रश्नहरूको बारेमा केहि
समय: 2019-12-18 हिट्स: 117
के लेजर कपाल हटाउने चोट छ?
मैले महसुस गरेको अनुभूति मेरो छालाको बिरूद्ध पिंग गरिएको प्लास्टिकको ब्यान्ड र हल्का बिजुली सदमेको बीचको क्रस हो जुन तपाईं अक्सर एस्केलेटरमा ह्यान्ड रेल छुनबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ।
यो केही खास क्षेत्रहरूमा थोरै बढी असहज हुन्छ जहाँ छाला बढि संवेदनशील हुन्छ जस्तै तपाईंको माथिल्लो ओठ र बिकिनी लाइनमा तर सेसनहरू बढ्दै जाँदा र कपाल झर्दै जाँदा भावना पनि कम हुँदै जान्छ।
लेजर कपाल हटाउनबाट कति समय लाग्छ?
प्रत्येक सत्र पछि मैले लालिमा र कहिले काहिं अनौंठो ह्वाइटहेडको टच देखें तर त्यहाँ कुनै जलिरहेको वा दाँतजस्ता लक्षणहरू थिएनन् - यदि त्यसो भए तपाईको टेक्नीशियनले तपाईको कपाल र छालाको प्रकारको आधारमा सेटिंगको गहनता पाउँदैन भने यो हुनु हुँदैन।
एलोवेरा जेल सधैं छालालाई शान्त र शान्त पार्न यस क्षेत्रमा लागू गरिएको थियो र मेरो पहिलो केही उपचार पछि मैले केशहरू बाहिर झर्दै गएको देखे - परिणाम!
आजको लागि छिटो अगाडि, म मेरो उपचारको लागि सात सत्रहरु हुँ (प्रत्येक सत्रमा एक सत्र सिफारिश गरीन्छ यसको कौंलो विकासको सही चरणमा कपाल समात्न) र म यो भिन्नतामा पर्याप्त विश्वास गर्न सक्दिन।
केहि स्थानहरूमा, मेरो कपाल अस्तित्वमा छैन र अरूमा यो यति ठिक छ कि यो मुश्किल मात्रै ध्यान योग्य छ।
DOS र लेजर कपाल हटाउने काम गर्नुहुन्न
- उपचार बीचमा दाढी गर्नुहोस्। जडलाई हानी नगरीकन कपाल छिटो हटाउने यो उत्तम तरिका हो। तपाईंको सौन्दर्य चिकित्सकले तपाईंको छालामा लेजर लागू गर्नु अघि क्षेत्र दाढी गर्दछ, जे भए पनि, कुनै देखिने कपाल मात्र अन्यथा गाडिनेछ!
- तपाईको लेजर उपचार पछि २ clo घण्टा भारी मेक-अप लागू गर्नुहुन्न छालालाई अवरुद्ध गर्न र ब्रेकआउट गर्नबाट जोगिन। यदि तपाइँ वास्तवमै गर्नुपर्‍यो भने, खनिज प्रकारहरूको लागि रोज्नुहोस्, जस्तै जेन इरेडेल, इनिका र बेयरमेनिरल जसले छालालाई 'सास फेर्न' दिन्छ।
- सूर्य जोखिमबाट बच्नुहोस् - र नक्कली ट्यान पनि छोड्नुहोस्। लेजरहरू फिक्का छालाका प्रकारहरूसँग बढी उपयुक्त छन्, त्यसैले, ट्यान राम्रो देखिए पनि यसले लेजरको कार्यकुशलतालाई न्यून बनाउनेछ, र कपालको जरामा जाने बाटोको लागि उर्जालाई रोक्दछ।
- मोम नगर्नुहोस्, एपिलेट गर्नुहोस् वा उपचार बीचमा तपाईंको कपाल काट्नुहोस् किनकि यसले कपाललाई जराबाट हटाउँछ। लेजरहरूले कार्य गर्दछ किनकि तिनीहरू छाला मुनि कपालको रment्गमा आकर्षित छन् र यदि यो पूर्ण रूपमा गयो भने, त्यहाँ लेजर zap गर्न केहि पनि हुनेछैन। यदि यो केस हो भने, तपाईंले जरा पुन: निर्माण गर्न अर्को चार हप्ता सम्म कुर्नुपर्नेछ जब सम्म तपाईं फेरि उपचार गर्न सक्नुहुन्न।
- एक उच्च कारक SPF लगाउनु पर्छ। उपचार पछि, छाला यूभी किरणहरू प्रति बढी संवेदनशील हुन्छ, त्यसैले यसलाई हाइपरपिग्मेन्टेशन र संवेदनशीलता जस्ता चीजहरूबाट जोगाउन यसलाई उच्च कारक सनस्क्रीनमा सधैं स्लेथर गर्नुहोस्।
- यस क्षेत्रलाई बिस्तारै बिस्तार गर्नुहोस् किनकि यसले मृत जरालाई सबै उपचार पछि बाहिर झर्काउन प्रोत्साहित गर्दछ र यसले तपाईंको छाला कम्तीदार र छायादार देखिन्छ।
अघिल्लो: इलेक्ट्रोलिसिस कपाल हटाउने
अर्को: प्रश्न र उत्तर: विज्ञले तपाईंको ईन्ग्रोन कपाल ह्यान्डल गर्ने उत्तम तरिका वर्णन गर्दछ